Wasiirka Gaashaandhigga XFS oo dhaliilay Ciidamada Dowladda ee gadoodsan. – Idil News
Wasiirka Gaashaandhigga XFS oo dhaliilay Ciidamada Dowladda ee gadoodsan.
MUQDISHO (IDIL NEWS)-Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed (Amar Danbe), ayaa ka hadlay gadoodka ay sameeyeen Ciidamo ka tirsan Xoogga dalka, kuwaasoo isaga soo baxay difaacyaddii ay ku lahaayeen Labada Gobol ee Shabeelooyinka.
Mar uu Wariyayaasha kula hadlayay Muqdisho ayuu Wasiirka ku sheegay inuusan marnaba raali ka eheyn inay mushaar la’aan noqdaan Ciidamada Milatariga ee dalka ka difaacaya cadawga, isagoo ugu baaqay Ciidamada inay si degan ku soo gudbiyaan cabashadooda.
“Aniga ka wasiir ahaan marnaba raali kama noqonayo in la dulmiyo shaqsi muwaadin Soomaaliyeed ama ka tirsan Ciidanka Xoogga dalka, sidoo kale ciidanka waajibaadka iyo aadaabta marka laga hadlayo waa inay dhowraan nidaamka u degsan dowladda” ayuu yiri Wasiir Amar Dambe.
Dhanka kale Wasiir Amar-dambe ayaa Ciidamada ku dhaliilay inay isaga soo baxaan difaacyadooda, isagoo sheegay in askairgii cabasho qabo ay tahay in Taliyayaashooda ay u soo gudbiyaan, iyagoo ku sugan Saldhigyadooda.
” Qofka tabasho wuu yeelan karaa tabashadiisa meesha uu joogo inuu ku soo bandhigo waaye, askariga wuxuu leeyahay Taliye qeyb, Taliye urur uu leeyahay, wuxuu leeyahay Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka, wixii tabasho ah waa in qoraal lagu soo gudbiyaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wasiirka Difaaca.
Hadalka Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya, ayaa ku soo beegmaya iyadoo wali aysan difaacyadoodii dib ugu laaban ciidankii ka soo baxay Gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana Muqdisho ku soo laabtay wafdigii dowladda ay dirtay, iyadoo lagu balamay in dowladda beri oo Sabti ah ay bixiso waxyaabaha ay dalbadeen Ciidanka, wixii xilligaasi ka dambeeyana ay dib ugu noqdaan goobihii ay ka yimaadeen.